Sida Loo Abuuro Waxbadan oo Hogaamiya B2B oo Nuxur Leh | Martech Zone
Sarkaalka Sarkaalka Suuqgeyntu (CMO) wuxuu bilaabay a daraasad cusub oo udub dhexaad u ah sida suuqgeynta ay si wax ku ool ah ugu abuuri karto hogaamin iib ah oo tayo leh iyada oo loo marayo ku-qasbid ku-habboon hoggaanka fikirka - hawl la caddeeyey inay halgan u tahay suuqleyda maanta. Dhab ahaan, kaliya 12% ee suuqleyda waxay aaminsan yihiin inay leeyihiin matoorro suuq-geyn ah oo wax-qabad sare leh oo si istiraatiijiyad ah loo qorsheeyay in lagu bartilmaameedsado dhagaystayaasha saxda ah ee leh waxyaabaha ku habboon iyo qancinta.
Khaladaadka ugu sareeya ee saameeya tirada soo dejinta ama diiwaangelinta waxaa ka mid ah:
48% suuqleyda ayaan horumarin waxyaabaha loo habeeyay ee loogu talagalay dhageystayaasha bartilmaameedka ah.
48% suuqleyda ayaa ah in aan loo qoondeyn miisaaniyad ku filan si loo abuuro waxyaabo soo jiidasho leh oo awood leh.
44% suuqleyda ayaa ah soosaarida waxyaabaha ku habboon ama macno u leh dhagaystayaasha kala duwan.
43% suuqleyda ayaa abuuraya nuxurka taasi in aan la gaarin go'aanka saxda ah guud ahaan ururka.
39% suuqleyda ayaa ah aan kabaallayneynin marinnada saxda ah ee wax loo qaybiyo iyo fursadaha isweydaarsiga si loo kordhiyo gaadhista.
Jiilka B2B Lead with Content wuxuu ubaahan yahay dhaqamadan ugu wanaagsan
Ka faa'iideyso qaababka wax ku oolka ah ee qaybinta iyo isugeynta.
U qaybi mawduucyada macluumaadka jira iyo ilaha dhinac saddexaad.
Abuur nuxurka kobcinta macdanta.
Ku habboon mawduucyada bartilmaameedka dhagaystayaasha.
In la sameeyo iskaashi buuxa oo u dhexeeya suuq geynta iyo iibinta.
Daraasada, Qulqulka Macdanta "Lead Lead" ee kaa caawinaysa inaad kobocdo, Waxay ogaataa in shirkadaha badankood ay ka maqan yihiin isku mid ahaanta waxa ka dhigan hogaaminta iibka dhabta ah. Sidoo kale kama mid aha kuwo si wax ku ool ah ula shaqeynaya iibka iyo kooxaha horumarinta ganacsiga si ay u abuuraan is waafajin ku saabsan istiraatiijiyado abuur, mowduucyo iyo ajandayaal u doodid
Warbixinta waxaa ku jira natiijooyinka ka soo baxay sahaminta suuqleyda heerka sare ee warshadaha kala duwan, marka lagu daro wareysiyada lala yeelanayo maamulayaasha suuq geynta ee IBM, SAP, Thermo Fisher Scientific, OpenText, CA Technologies iyo Informatica. Cilmi-baaristu waxay si qoto-dheer u eegaysaa, aragti dhammaystiran oo ku saabsan sida loo maareeyo istiraatiijiyadaha suuq-geynta waxyaabaha, sida loo cabbirayo waxqabadka maaddooyinka, iyo heerka digriiga la duubay, kor loogu qaadayo iyo isku-darka si loo soo saaro qulqulka hoggaanka ugu wanaagsan.
Tags: b2bsuuq geynta b2bjiilka hogaaminta b2bbarbaarinta b2bxeeladaha hogaaminta b2bhogaaminta b2bcmogolaha cmo
Maqaal aad u xeel dheer. Ma jeclaan laheyd inaad aqriso maqaalo kale oo lamid ah. Mahadsanid
Douglas, oo aad ugu faraxsan inuu helay balooggaaga iyo agabyada oo aad ka wada faa'iideysato dhammaantood. Waxyaabaha la qaabeeyey, dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, hogaamiyaasha B2B, kuwan oo dhami waa fikrado fiican oo la doonayo. Maxay tahay fikirkaaga ku saabsan u socodsiinta hawshan shirkadaha hogaaminaya B2B ee u maleynaya inay diiradooda ugu weyn si ay u fuliyaan kor ku xusan hal olole ugu weyn? Waxaan fiirinayaa sanduuqa wicitaanka, bant.io iyo leadgenius. Waad ku mahadsantahay kaalmadaada.
Nabade John! Tani waxay noqon laheyd wada hadal aad u wanaagsan Beesha MarTech - fadlan ku soo biir oo dhaji!
Waxaan ka helay cilmi baarista ku dhacday qoraalkan. Ku-guuleysiga suuq-geynta waxyaabaha ayaa aad uga dhib badan inta badan suuqleydu filayaan- gaar ahaan ganacsiyada yar-yar ee miisaaniyaddoodu yar tahay, xooggooda, iyo khibraddooda.